'शरीर विज्ञानसम्बन्धी चिन्तनको प्रारम्भ यहीँ भएको थियो'
हामी विश्वलाई मानवोचित विश्व बनाउन चाहिरहेका छौँ । विश्व भनेको धर्ती र मानव समाज । प्रकृति र मानव समाज । यसको सन्तुलन पनि कायम गर्न चाहिरहेका छौँ । योग मूलतः यिनै विषयसँग केन्द्रित छ । योग यस भूमिको उपज हो । हामी यस ठाउँलाई आदियोग भूमि भन्न सक्दछौँ । आदियोग गुरु, आदियोगी शिव अर्थात् शम्भुनाथले यसै भूमिबाट हजारौँ वर्षअघि योगको अभ्यास, योगको चिन्तन र योग दर्शन अर्थात जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय र जीवन र प्रकृतिको सम्बन्धको चिन्तन, ध्यान आदि कुराको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । त्यसकारण हामी शिवलाई आदियोगी मान्दछौँ ।
गोरखा भुपुहरु बेलायतामा – समानताको मुद्धा कहिलेसम्म ?
गोरखा आन्दोलनको समय थियो । एकातिर संगठन निर्माणमा कठिनाई थियो भने अर्को तर्फ जायज माग होइन भन्ने सम्बन्धित आफ्नै जमात र जमातसित सम्बन्धित अन्य बाहिरीय बुद्धिजीविहरुको ठोकुवा उत्तिकै प्रबल थियो । परराष्ट्रहरुसितको पहुच भएका जनताका लागि बोल्न सक्ने सरकारको उच्च तहमा विराजमान राजनीतिपाटिका हुन वा प्रहरी, प्रशासन वा न्यायक्षेत्रका सवैलाई बृटिश गोरखा भुपुहरुको माग जयज हो भन्ने थाहा भएपनि उनीहरुले निको मानिरहेका थिएनन् ।
कुनै पनि देशको भाषा सिक्ने १० सहज उपाय
एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त भाषा नभएको भए आफना भावना र विचार कसरी व्यक्त गथ्र्यौ ? एकआपसमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउथ्यौँ ? भाषाले हामीलाई सजिलोसँग प्रतिक्रिया जनाउन, विचार व्यक्त गर्न र भावना पोख्न सहज बनाउँछ । वाक्य र शब्द बनाएर प्रतिक्रिया जनाउने मानिसको यो सिर्जनशिल कला साँच्चिकै सुन्दर छ ।
‘नेपालको शक्ति संघर्षका निर्णायक युद्ध नेपालका डाँडाकाँडामा होइन, दिल्लीका बैठकहरूमा भएका छन्’
बीबीसीका चर्चित विदेश मामिला संवाददाता हम्फ्री हक्सलेको Democracy Kills पुस्तक लोकतन्त्र विरोधी ‘प्रतिगामी’ बमन होइन । तर ‘पश्चिमा शैलीको लादिएको लोकतन्त्र’का घातक खतराहरुको सूक्ष्म विश्लेषण हो ।
विद्यार्थीले काम र पढाइलाई कसरी समायोजन गर्ने ? ५ टिप्सहरू
जुनसुकै व्यक्तिका लागि कलेजमा अध्ययनरत समय निकै नै तनाबमय हुने गर्दछ । तपाइले पहिले उच्च शिक्षामा पढिरहनुभएको भन्दा धेरै पढ्न पर्नुका साथै सायद तपाइ घरबाट टाढा रहेर जुनसुकै काममा अभिभावकको सहयोगबिना रहनुहुने भएकाले अन्य थुप्रै व्यवधानहरू रहने गर्दछन् । साथसाथै, यसै उमेरमा गरिने पार्टीहरू, खेलकुद गतिविधि तथा अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्यले पनि तपाइको तालिकामा स्थान पाउनै पर्यो ।
एकवर्ष अघि यसै समयतिर हामीहरु कोभिड–१९ को प्रारम्भिक असर भोग्दै थियौं । मानिसको जीवन र अर्थतन्त्रको रक्षा बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा बहस जारी थिए । हामीले ‘जीवन पहिला’ भन्यौं र त्यही अनुरुप योजनाहरु बनायौं ।
संकटका बेला सत्ता परिवर्तनको खेल
संकटका बेला सत्ता परिवर्तनको खेल, इतिहासले याद राख्नेछ यी काला दिनहरु र राजनीतिज्ञहरु
'ओलीले शासन चलाउने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन्'
ड्राइभरको नैतिक संकटः बाइरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै
सरकारः राज्य संचालन गर्न राज्यका हरेक पक्षले आफ्नो अधिकार सुम्पिएको शक्तिशाली सर्वभौमशक्ति हो । उस्को बाध्यकारिता भनेको नैतिकता नै मुख्य हो । सर्वशक्तिमान सरकार, राज्यको हरक्षेत्रले अनुसरण गर्ने आदर्श पनि हो । सरकारको आदर्शीकरणले राज्य संचालन हुन सरकारमा हुनु पर्ने नैतिकता नै यस्तो अस्त्र हो, जस्को कारण सरकारमा स्वतःस्फूर्त मार्गनिर्देशन भएको हुन्छ । अझ लोकतन्त्रमा त नैतिकता नै लोकतन्त्रको प्राण हो ।